Katidral City Mature Cheddar Chiiz 350G (Iceland) | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Katidral City Mature Cheddar Chiiz 350G (Iceland) - Ordrs
Katidral City Mature Cheddar Chiiz 350G (Iceland)
Ezigbo na mellow Katidral City Mature Cheddar
Ezigbo, mellow na hugely vasatail Katidral City Mature Cheddar bụ a mgbe mgbe nile kpochapụwo - a nkasi obi cheddar na-anapụta 'a uto nke ụlọ'. Akwa maka jaket jaket gị ma ọ bụ lasagne cheesy.
- Site na Mba ahụ Chiiz Na-amasịkarị
- Chetaghachi ka ị cheddar dị ọhụrụ
- Mere na Great Britain na-eji mmiri ara ehi Britain
- Ọ dị elu na protein na isi iyi nke calcium
- Kwesịrị ekwesị maka ndị anaghị eri anụ
Na ala na ala, ịnọdụ ala mara mma na sanwichi ma ọ bụ na-eme mkpọtụ mara mma na tost, ọ nweghị ihe dịka Katidral City. Nke ahụ bụ n'ihi na ude anyị na-emeri na-eme ka mmanụ aeryụ na-eji mmiri ara ehi eme ihe site na ndị ọrụ ugbo West Country ịkebere iji mepụta ụlọ pụrụ iche anyị, dị mma, mara mma. Nke bụ ya mere anyị ji eme ọnụ ịbụ mba kacha amasị.
Mmiri ara ehi anyị niile bụ 100% ndị Britain wee nweta ihe dị ka ndị ọrụ ugbo mmiri ara ehi na mpaghara South West narị atọ na iri ise, bụ obi ala mmiri ara ehi kacha baa ọgaranya nke England.
Soro anyi na Facebook / CathedralCity
Guzosie ike na 1966. Site na nhọpụta nye onye isi ya Queen Queen nke na-enye mmiri ara ehi na mmiri ara ehi ngwaahịa Dairy Crest Limited, Surrey. Red traktọ emesi obi ike.
Juru n'ọnụ na a nchebe ikuku.
Site na Mba Na-ahụkarị Chiiz
Icheta iji chebe cheddar gị ọhụrụ
Mere na Great Britain na-eji mmiri ara ehi Britain
Nnukwu protein na isi iyi nke calcium
Ngwugwu ngwugwu: 350g
Elu na protein
Isi iyi nke calcium